မိုးကောင်းကင်: New Proxys
အခုတ လော ဆော်ဒီ Proxy တွေ ခဏခဏ ဘန်းခံ နေရပါတယ်။... ဒါကြောင့် ဘလော့စပေါ့နဲ့ ဘလော့ ရေးတဲ့သူများ.. ( ကျွန်တော်အပါအ၀င် ) အသုံးပြုရတာ အဆင်မပြေဘူး ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဟိုရှာ ဒီရှာ နဲ့ပဲ ရှာဖွေ တွေ့ရှိတဲ့ ပရုပ်စီလေး ကိုများ.. ပြန်လည်လို့ မျှဝေ ပေးလိုက်မယ်နော်.... ။
ဟိုးအရင်က သုံးနေကြတာကတော့ 212.116.220.164 : 443 နဲ့ သုံးနေကြတာ အဆင်ပြေနေပါတယ်။ အဲဒီ Porxy က တစ်ချို့သော နယ်က အမ်ပီတီ လိုင်းတွေမှာ သုံးလို့ ရနေသေးတယ်လို့ ကြားရပါတယ်။ မန်းမှာတော့ မရတော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ထပ်ရှာလိုက်တော့ 212.116.220.165 : 443 နဲ့ က သုံးလို့ ရနေတာ ကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမ်ပီတီ မှာပဲ သုံးလို့ ရနေပြီး ၀ိုင်မက်စ်မှာ သုံးလို့ မရဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၀ိုင်မက်စ်မှာ သုံးလို့ ရတဲ့ ပရုပ်စီ လေးကိုထပ်ရှာရပါတယ်။ အခု ၀ိုင်မက်စ်မှာ သုံးလို့ ရတဲ့ တရုတ် Proxy လေးကတွေကတော့
204.152.222.216 port 443
64.62.199.11 port 443
ဒီဟာလေးတွေ နဲ့ အဆင်ပြေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ အဲဒါ လေးတွေနဲ့ မရရင်လည်း...ဒါလေးနဲ့ ကျော်ဝင်လို့ရပါတယ်။
နောက်ထပ် အသစ်များ တွေ့ရှိလာခဲ့သူများလည်း... ကျွန်တော်တို့အားလုံးကို ပြန်လည်လို့ မျှဝေပေးစေချင်ပါတယ်...
အားလုံး ကျော်နိုင်ခွနိုင်(websiteတွေ) ကြပါစေနော်...... :)
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 3:19 PM
ကျေးဇူးပဲဗျို့ . . .
ကျွန်တော်က ဆော်ဒီproxy မရှိရင် အလုပ်မလုပ်တက်တော့ဘူး . .
အခုလို ရှာဖွေပီးတင်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ် . .ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ရှာပါသေးတယ် . .အဆင်မပြေဘူးဗျ . ..
အခုတော့အဆင်ပြေသွားပီ . . .အခုပေးတဲ့proxy မရတော့တာနဲ့ ဒီကိုပဲလာတော့မယ်နော် . .အဆင်သင့်သာရှာပေးထားတော့ . .ဟဲဟဲ:)